Yuba Factory - China Yuba Abakhiqizi, abahlinzeki
Induku entsha ye-Bean Curd
Kusha izinti zikabhontshisi, ezaziwa nangokuthi i-yuba entsha, ubhontshisi wendabuko owenziwe ukudla kanye nokudla okuvamile okuluhlaza ezindaweni zaseChina nase-Asia. Inokunambitheka kabhontshisi okuqinile nokunambitheka okwehlukile okungenayo eminye imikhiqizo kabhontshisi. Izinti ezintathu zikabhontshisi wombala zenziwe ngosoya, ubhontshisi oluhlaza nobhontshisi omnyama, kugcina umbala oyinhloko wobhontshisi, ngaphandle kwezithasiselo, okunambitheka okunothile nephunga elimnandi.
I-curd stick entsha kabhontshisi inezinga eliphezulu lezakhamzimba, eliqukethe amafutha ayi-14g, amaprotheni angama-21.7g, ushukela ongu-48.5g namanye amavithamini namaminerali nge-100g ngayinye. Isilinganiso salezi zinto ezintathu zamandla silinganiswe kakhulu. Ukuyidla ngaphambi nangemva kokuzivocavoca, kungagcwalisa ngokushesha amandla futhi kunikeze amaprotheni adingekayo ekukhuleni kwemisipha.
Amashidi obhontshisi omisiwe, awaziwa nangokuthi amashidi e-yuba, ubhontshisi wendabuko owenziwe ukudla nokudla okuvamile okuluhlaza ezindaweni zaseChina nase-Asia. Inokunambitheka kabhontshisi okuqinile nokunambitheka okwehlukile okungenayo eminye imikhiqizo kabhontshisi.
Ngemuva kokuthi ubisi lwe-soya selufudunyeziwe futhi lubilisiwe, kwakheka ifilimu elincanyana ebusweni ngemuva kwesikhathi sokulondolozwa kokushisa. Ngemuva kokukhishwa, ilenga iye esimeni samashidi bese iyomiswa.
Izinti ezomisiwe zikabhontshisi omnyama, ezaziwa nangokuthi i-black bean yuba, ubhontshisi wendabuko owenziwe ukudla kanye nokudla okuvamile kokudla okuluhlaza ezindaweni zaseChina nase-Asia. Inokunambitheka kabhontshisi okuqinile nokunambitheka okwehlukile okungenayo eminye imikhiqizo kabhontshisi.
Ubhontshisi omnyama wesoya unamaprotheni amaningi futhi unama-calories aphansi. Ubhontshisi omnyama uqukethe amaprotheni angama-360% -40%, okuyinkathi ephindwe kabili kunenyama, ephindwe kathathu kunamaqanda nezikhathi eziyi-12 njengobisi. Ubhontshisi omnyama uqukethe izinhlobo eziyi-18 zama-amino acid, ikakhulukazi izinhlobo ezi-8 zama-amino acid adingekayo emzimbeni womuntu. Ubhontshisi omnyama usaqukethe izinhlobo eziyi-19 ze-oleic acid, okuqukethwe kwawo okunamafutha acid angafinyelele ku-80%, izinga lokumunca lifinyelela kuma-95% ngenhla, ngaphandle kwalokho linganelisa umzimba womuntu ukuba uhlanganyele ngaphandle kwesidingo, kusenesenzo esinciphisa i-cholesterol egazini.
Izinduku zikabhontshisi ezomile, ezaziwa nangokuthi i-yuba, ubhontshisi wendabuko owenziwe ukudla nokudla okuvamile okuluhlaza ezindaweni zase-China nase-Asia. Inokunambitheka kabhontshisi okuqinile nokunambitheka okwehlukile okungenayo eminye imikhiqizo kabhontshisi.
Ngemuva kokuthi ubisi lwe-soya selufudunyeziwe futhi lubilisiwe, kwakheka ifilimu elincanyana ebusweni ngemuva kwesikhathi sokulondolozwa kokushisa. Ngemuva kokukhishwa, ilenga phansi yenze amagatsha bese iyomiswa. Ukuma kwayo kufana namagatsha oqalo, ngakho-ke ibizwa ngokuthi izinti zikabhontshisi.
Izinti Zokubhontshisi Ezomile
Ukudla Amakinati Anosawoti, Induku entsha ye-Bean Curd, Izingane Amabhisikidi, Amaphakethe Esoso Soy, Ikhukhi leLadyfinger, I-Hawthorn Strip,